फेरि बढ्यो संक्रमण दर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
फेरि बढ्यो संक्रमण दर
विज्ञ भन्छन्– ‘बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप नपुर्‍याउँदा, परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ विस्तार नहुँदा तथा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा संक्रमण दरमा कमी आएन’
असार २४, २०७८ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना संक्रमण दर विस्तारै उकालो लागेको छ । बुधबार ७ हजार ८ सय ३५ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार ७७ जना अर्थात् २६.५० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यो पछिल्लो एक सातामा देखिएको सबैभन्दा बढी संक्रमण दर हो । आइतबार २१.३६, सोमबार २३.२६ र मंगलबार २२.८९ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यो तथ्यांकले तेस्रो लहरको स्पष्ट संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप नपुर्‍याउँदा, परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ विस्तार नहुँदा र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा संक्रमण दरमा कमी नआएको हो ।
‘१०–२० जनामा संक्रमण देखिए देशभर फैलिन सक्ने स्थितिमा अझै दिनहुँ करिब दुई–तीन हजारमा संक्रमण देखिन थालेको छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘निषेधाज्ञाताका घरभित्रै परिवारबीच रहेको भाइरस हाल खुला भएर समाजमा पुनः फैलिन थालेको छ ।’ सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्दा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा धेरै जना पोजिटिभ निस्किन्थे । जसलाई आइसोलेसनमा बसाउँदा समाजमा संक्रमण फैलने र बढ्ने सम्भावना घट्थ्यो,’ उनले भने ।
छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुनेलगायत गम्भीर बिरामी मात्र परीक्षण गराउन गइरहेका छन् । निषेधाज्ञाको समयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको भए हाल दैनिक संक्रमित पाँच सयभन्दा कम हुन सक्ने डा. मरासिनीले दाबी गरे । ‘सरकारले आईसीयू, भेन्टिलेटरमा एक जना बिरामीका लागि १० लाखभन्दा बढी खर्च गर्ने तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण नगर्दा तेस्रो लहर आउने निश्चित छ,’ उनले भने । ईडीसीडीका अर्का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुर दैनिक संक्रमण दर एक चौथाइभन्दा बढी देखिनु नराम्रो संकेत भएको बताउँछन् ।
‘कम्तीमा ६० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप लगाइसकेपछि मात्र संक्रमणको पुनः विस्तार हुने सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बहुसंख्यक नागरिकमा दुवै मात्रा खोप लगाउनै धेरै समय लाग्ने देखिएको छ ।’ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट देखिएका लक्षण भएका र नभएकालाई अनिवार्य आइसोलेसनमा न्यूनतम १० दिन राख्न उनले सुझाए । उनका अनुसार यस्तो आइसोलेसन सरकारले निर्माण गरेको वा व्यक्ति विशेषले विशेष मापदण्डसहित घरमै तयार पारेको हुनुपर्छ ।
विज्ञका अनुसार हाल मृत्यु कम देखिए पनि संक्रमणले थला परेर जटिल अवस्थामा नपुग्दासम्म परीक्षण गराउन जानेको संख्या पनि निकै कम छ । मृत्युभन्दा संक्रमण दर र अस्पताल भर्ना हुने दरले संक्रमण पुनः विस्तारको चरणमा रहेको डा. मरासिनीले बताए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म सक्रिय संक्रमित २६ हजार ५ सय ४४ अर्थात् ४.०८ प्रतिशत छन् । ५ सय ७१ जना आईसीयू र १ सय ६१ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ३ सय २८ जना आईसीयू र ९४ जना भेन्टिलेटरमा छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ सय ५५ जना आईसीयू र ५७ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
कुल सक्रिय संक्रमितमध्ये झन्डै आधा वाग्मती प्रदेशमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कुल संक्रमितको ४३.५६ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ५ सय ६३ सक्रिय संक्रमित वाग्मतीमै छन् । प्रदेश १ मा १८.८९ प्रतिशत, गण्डकीमा १३.१६, प्रदेश ५ मा ९.३६, प्रदेश २ मा ५.६०, कर्णालीमा ४.८२ र सुदूरपश्चिममा ४.५८ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०७:५९
कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत अस्ट्राजेनेकाको खोप पनि जुलाईभित्रै आउने
असार २३, २०७८ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोभिड–१९ विरुद्ध एक मात्रा लगाए पुग्ने ‘जेन्सेन’ खोप ल्याइने भएको छ । अमेरिकी फर्मास्युटिकल कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनद्वारा उत्पादित कोभिडविरुद्धको खोप ‘जेन्सेन’ कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा नेपालले पाउन लागेको हो ।
जोन्सनको ‘जेन्सेन एडी२६.सिओभी.२’ एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप हो । यो खोपलाई पहिलो पटक गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले आपत्कालीन उपयोगका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । यो खोप १८ वर्षभन्दा माथि सबै उमेरका व्यक्तिलाई लगाउन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
‘एक मात्रा मात्र चाहिने जेन्सेन खोप नेपाललाई दिने कुरा कन्फर्म भयो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोख्रेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कति मात्रा र कहिलेसम्ममा दिने भन्ने कुरा एक सातापछि थाहा हुन्छ ।’ कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने खोप अनुदान सहयोगअन्तर्गत पाउनेछ । ‘यो खोप अमेरिकी सरकारले कोभाक्सलाई दिने र कोभाक्सको कोटाअन्तर्गत हामीकहाँ आउने हो,’ उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो खोपबारे जारी अन्तरिम गाइडलाइनअनुसार यो खोपको ०.५ एमएल इन्ट्रामस्कुलरको रूपमा डल्टोइड मांसपेशीमा दिइन्छ । हालसम्म यो खोपको एउटै मात्रा प्रस्ताव गरिएको छ । अतिरिक्त मात्राको आवश्यकता र समयबारे क्लिनिकल ट्रायलअन्तर्गत अध्ययन जारी छ । जोन्सनको विज्ञप्तिअनुसार यो खोपलाई माइनस २० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा दुई वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा बढीमा ३ महिनासम्म राख्न सकिन्छ ।
यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा वितरण गरिएपछि पुनः निम्न तापक्रममा राख्न मिल्दैन । गम्भीर एलर्जीको समस्या भएका व्यक्तिले यो खोप लगाउनु हुँदैन । विज्ञहरूका अनुसार पलिसार्बेटबाट एलर्जी भएकाहरूले अस्ट्राजेनेका वा जेन्सेनको खोप लगाउनु हुँदैन । पलिसार्वेट औषधि र मेकअपजस्तो उत्पादनमा पाइने सामान्य घटक हो । यो खोप गम्भीर र अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमा ८५.४ प्रतिशत प्रभावकारी छ । खोप लगाएको २८ दिनपछि मध्यम र गम्भीर संक्रमणविरुद्घ ६६.९ प्रतिशत प्रभावकारिता देखिएको छ ।
कोभाक्स सुविधाबाटै अस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप जुलाई महिनाभित्र नेपाललाई दिने जानकारी आएको डा. पोख्रेलले बताए । यो खोप कति मात्रा दिने हो भन्नेबारे हालसम्म यकिन भएको छैन । अस्ट्राजेनेकाको खोप आउनासाथ पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइनेछ । ६५ वर्षमाथिकाका लागि गत वर्ष फागुन २३ देखि सुरु भएको खोप अभियानअन्तर्गत करिब १३ लाख ६० हजार जनाले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् । उनीहरूले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् ।
अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकसित ‘एजेडडी १२२२’ खोपलाई सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले भारतमा ‘कोभिसिल्ड’ को नाममा उत्पादन गरिरहेको छ । कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत हालसम्म नेपालले ३ लाख ४८ हजार मात्रा ‘कोभिसिल्ड’ खोप पाएको छ । कोभिसिल्ड खोप भारतसँग २० लाख खरिद गरिएकामा हालसम्म आधामात्रै नेपालले पाएको छ । भारतले अनुदानमा छुट्टै १० लाख मात्रा खोप दिएको थियो । ‘पहिले जस्तै न्यूनतम साढे तीनदेखि १५ लाख मात्रासम्ममा कति दिने हो यकिन भएको छैन,’ डा. पोख्रेलले भने, ‘कोभाक्सलाई जति उपलब्ध हुन्छ, त्यसअनुसार नै हामीले पाउने हो ।’
कोभाक्स सुविधाबाट उपलब्ध गराइने अस्ट्रेजेनेकाको खोपको मात्राअनुसार यसलाई ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमा समेत उच्च उमेरकालाई सबैभन्दा पहिलाको रणनीतिअनुसार दोस्रो मात्रा लगाइने डा. पोख्रेल बताउँछन् ।
प्रकाशित : असार २३, २०७८ ०६:३०